Nhau - Kuisa mabhegi e hypochlorous acid disinfectant
Kufurirwa COVID-19, pane kuwedzera kuri kudiwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya senzira yekuuraya utachiona uye doro.
Kubva kutanga kwegore 2020, our michina vari kushanda maawa makumi maviri nemana zuva re musika we hypochlorous acid disinfectant uye doro.
Tiri kutumira anodarika 100000 pcs mabhegi ane matepi (pamwedzi) kuenda kuJapan musika kubvira gore 2020. Inonyanya kufarirwa kugona ndeye 5 litre uye 20 litita emvura ye hypochlorous acid disinfectant uye doro. Isu tinowanzo tumira kuKIX nendege, kana kutumira negungwa kune Osaka chiteshi, NAGOYA chiteshi uye TOKYO Port.
Kunze kwebhegi redu mubhokisi (cheertainer uye ldpe cubitainer), tinoda kuzivisa ese edu ekuputira zvigadzirwa:
1. SJA Series - Cubitainer bhegi mubhokisi, Ldpe yakapfava epurasitiki zvinhu, kupeta, isina yekutakura mubato. Saizi yakaenzana 1L-25L.
2. SJB Series --- Inowira mvura mudziyo, Ldpe zvinhu, BPA yemahara, yekunze kushandiswa zvakanyanya, nekutakura mubato. Saizi yakaenzana 5L, 10L uye 20L.
3. SJC Series-Semi foldable jerry can, Ldpe material, soft plastic, portable, yakasimba, kushandiswa kwekunze, nekutakura mubato. Isu tiri vapi vakuru veUNHCR yerudzi urwu rwechigadzirwa. Saizi saizi 10L uye 20L.
4. Cheacherer bhegi rakamira mubhokisi, rakagadzirwa nePA + PE muti-masheya, yakachipa kupfuura ldpe cubitainer, chitupa cheEU, chisina kurema, chengetedza nzvimbo yekuchengetera, kudzikisa mari dzekutumira, dhizaini nyowani ine maburi akatakura mubhegi rega rega, cube-chimiro inokodzera bhokisi zvakakwana , yakasimba kwenguva refu, iine akasiyana fit / accessories. Saizi saizi 5L, 10L, 18L, 20L.
Isu tiri fekitori ine makore gumi ekugadzira ruzivo. Tave tichitengesa mhando iyi yemabhegi muAlibaba kwemakore mapfumbamwe. Mutengi 'kuda uye zano ndiro simba redu rekutyaira, vatengi 'kugutsikana ndeyedu kutevera. Tiri ikozvino kutarisa mberi ku kubatana kukuru nevatengi vekunze kwenyika kunoenderana nekubatsirana
Isu tinotenda zvakasimba kuti vanhu venyika vachakunda COVID-19 munguva pfupi iri kutevera.